Zuma’s son ‘plans to build hotel in Zimbabwe’s Victoria Falls’ – Trendsdaily
President Jacob Zuma’s son is planning on opening a hotel in Victoria Falls, according to a state-controlled newspaper from the southern city of Bulawayo. Despite Zimbabwe’s growing economic crisis and recession, he still thinks it is wise to open a business there.
According to the Chronicle daily, President Zuma said that South Africa and Zimbabwe will always be there for each other “even when things are not looking well”.
“We are looking at a possible joint venture to construct a hotel in Victoria Falls with Solomon” Matsa, the owner of the newly-opened Golden Mile Hotel in Kwekwe, Zuma was quoted as saying. His sister Gugulethu is married to Zimbabwe opposition politician Welshman Ncube’s son Wesley.
President Zuma was reported as saying investment in Zimbabwe “will create employment.”